Madaxda Dowladda oo ku loolamaya Magacaabista Golaha Wasiirada Soomaaliya - Awdinle Online
Madaxda Dowladda oo ku loolamaya Magacaabista Golaha Wasiirada Soomaaliya
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi farmaajo, Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cbadiraxmaan oo uu wehlinayay Ra’iisul Wasaaraga Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay waxaa ay dhowr jeer yeesheen kulamo wadatasho ahaa.
Wararka la helay ayaa waxaa ay sheegayana in kulamada looga hadlayay magacaabista Xubnaha Golaha Wasiirada Soomaaliya maadaama Xukuumadda Cusub ee la soo dhisi doono ay heysato waqti yar oo laga doonayo inay wax badan qabato.
Kulamada wadatashiga ah ee la xiriira soo magacaabista Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa waxaa ay ahaayeen todobaadkaan kuwa si isdaba-jooga ah uga dhacayay Madaxtooyada, waxaana lagu wadaa in Ra’iisul Wasaare Rooble uu saacadaha soo socda ku dhawaaqo Golihiisa Wasiirada.
Xogaha la helay ayaa waxaa ay sheegayaan in madaxda sare ee dalka uu midba midka kale doonayo inay Golaha Wasiirada kasoo dhex-muuqdaan Xubno uu wato, taas oo sii dheereysay waqtiga la soo Magacaabi lahaa Golaha Wasiirada.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilligii ay codka kalsoonida siinayeen Xildhibaannada Golaha Shacabka waxaa uu balan qaaday in ilaa iyo 8 qodob in uu diirada saari doono, kuwaas oo Bulshada Soomaaliyeed u baahan yihiin in wax laga qabto.
Previous articleDhacdo naxdin leh oo ka dhacday Muqdisho
Next articleTrump oo dalbaday in Ciidamada Mareykanka ka jooga Soomaaliya laga soo saaro